Asambodo & Nrite
Ngwungwu batrị site na ngwa
Batrị eletrọnịkị ndị ahịa
Batrị ụlọ ọrụ
Batrị ọkụ anyanwụ
Ngwunye batrị Li-ion
3.7V Li-Ion ngwugwu
7.4V Li-Ion ngwugwu
11.1V Li-Ion ngwugwu
14.8V Li-Ion ngwugwu
18.5V Li-Ion ngwugwu
24V Li-Ion ngwugwu
36V Li-Ion ngwugwu
48V Li-Ion ngwugwu
60V Li-Ion ngwugwu
72V Li-Ion ngwugwu
Ngwugwu batrị LIFEPO4
36V LiFePO4 ngwugwu
48V LiFePO4 ngwugwu
72V LiFePO4 ngwugwu
Nkọwa nke nka nka na batrị lithium
1. Gịnị bụ batrị lithium bụ batrị anyị na-eji na ekwentị mkpanaaka na ụgbọ ala eletrik. Chinese: Lee nkọwa ndị ọkachamara karịa bụ iji lithium metal ma ọ bụ lithium alloy dị ka ihe electrode dị mma, na-eji ihe ngwọta na-abụghị nke hydrolyzed, nke enwere ike ijikwa ya ọzọ. Batrị lithium nwere ike ịbụ ro ...
Ngwugwu batrị lithium kwesịrị ịbụ isi ụlọ ọrụ ụgbọ ala?
Anyị niile na-eche banyere teknụzụ batrị, ndụ batrị na ọkwa nchekwa, mana ọ dị ka ọkwa nka nke mkpọ batrị. Kedu ụdị nkà ọhụrụ a na-eji eme ihe bụ obere nchegbu. Echere m na nke a metụtara nkà nke onye nwe ugbu a ma nwee nnukwu ikike nchịkwa. njikọ. N'ebe ahụ t...
Teknụzụ batrị lithium-ion maka ụgbọ ala eletrik
Ike batrị bụ otu n'ime ihe ngosi arụmọrụ dị mkpa iji tụọ arụmọrụ batrị. Ọ na-anọchi anya ọnụọgụ ike batrị wepụtara n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ (ọnụego mwepu, okpomọkụ, voltaji nkwụsị, wdg) (JS-150D nwere ike iji mee ihe maka ule nkwụsị), ya bụ, bat ...
Kedu ọrụ dị mkpa nke sistemu njikwa okpomọkụ nke mkpọ batrị?
N'ihi na okpomọkụ dị oke elu ma ọ bụ dị ala ga-emetụta ndụ ọrụ na arụmọrụ nke batrị lithium ike ozugbo, ma nwee ike ime ka nchekwa nke usoro batrị ahụ, na ogologo oge na-enweghị nkesa nke ebe okpomọkụ dị na igbe batrị ga-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma. modul batrị na c...
Teknụzụ nrụpụta batrị lithium-ion
1. Cascade utilization na raw material recycling N'ihi na lara ezumike nká ike batrị lithium-ion, ndị na-ewere ụzọ nke cascade tinye n'ọrụ ga-naghachi ihe mgbe cascade itinye n'ọrụ; maka mgbake ihe ozugbo, batches dị ntakịrị, ọ nweghị akụkọ ihe mere eme iji lelee, nchekwa m ...
Iji sistemu njikwa batrị lithium-ion BMS
Usoro njikwa batrị (BMS) bụ usoro njikwa na-echekwa nchekwa batrị. Ọ na-enyocha ọkwa ojiji batrị oge niile, na-edozi ojiji batrị ahụ na-adịghị mma site na usoro ndị dị mkpa, ma na-enye nkwa nchekwa maka iji ụlọ ngbanwe batrị n'enweghị nchekwa.
Nchedo gburugburu ebe obibi na mkpofu batrị lithium-ion na-adịghị emerụ ahụ na-emezu ihe achọrọ maka mmepe na-adigide. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke batrị lithium-ion abanyela n'ahịa, na imegharị na iji batrị lithium-ion eji eme ihe aghọwokwa nnukwu ihe ịma aka nye ụlọ ọrụ ahụ. ...
Akụkọ ihe mere eme nke Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd
site admin na 20-07-08
Shenzhen SOSLLI Technology Co., Ltd. e hiwere na 2011. Ọ bụ ụlọ ọrụ nkà na ụzụ dị elu nke ọkachamara na R & D, mmepụta na ahịa nke batrị lithium. Ugbu a ọ nwere ngalaba azụmahịa atọ: nrụpụta cell batrị lithium, nkewa ngwaahịa emechara, yana akara SOSLLI nke ya. Isi p...
Omenala ụlọọrụ SOSLLI
Ọhụụ ụlọ ọrụ Suo Sili na-eto nke ọma wee bụrụ ụlọ ọrụ narị afọ! Ebumnuche anyị Bụrụ ụlọ ọrụ ume ọhụrụ nke mba ụwa nwere teknụzụ na-eduga, ọmarịcha mma, ihe ọhụrụ na arụmọrụ, yana ọrụ klaasị mbụ! core value Diligence, iguzosi ike n'ezi ihe, ihe ọhụrụ na arụmọrụ, ach...
SOSLLI na-abanye n'ọhịa nke ụlọ elu ọdụ ọdụ nkwukọrịta
Kemgbe mmalite nke afọ a, Suosili akọpụtala ihe ịga nke ọma na ngalaba nchekwa nchekwa ike. N'ịgbaso mbinye aka nke nnukwu ikike ịre ahịa nchekwa ike na Zhongshan Lubo na Zhongshang Intelligent, na nso nso a, Suosili na China Tower Co., Ltd. (nke a na-akpọ China Tower) Si ...
SOSLLI nwere sistemu nhazi batrị dị elu, kabinet ịka nká, ngwa ule BMS, akụrụngwa nnwale batrị li-ion dị ugbu a, igwe ịgbado ọkụ akpaka, igwe nzacha akpaka na ebe nnwale.
3.6V ngwugwu batrị lithium ion, 3.6V batrị lithium-ion, 3.7V batrị lithium-ion, Batrị cylindrical Li-ion, 60v Lifepo4 ngwugwu batrị, Batrị Li-Polymer,